Iyini i-BIOS futhi ingeyani ku-PC yakho | Iforamu yeselula
U-Eder Ferreno | 17/11/2021 15:55 | Izinhlelo zokusebenza
I-PC yethu yenziwe ngenani elikhulu lezingxenye ezahlukene. Lokhu kusho ukuthi kunenqwaba yamagama okumele siwajwayele, amanye awo amasha kubantu abaningi. Okuthile abasebenzisi abaningi abakufunayo ukwazi ukuthi iyini i-BIOS kukhompyutha. Itemu okungenzeka uke wezwa ngalo futhi ofuna ukwazi kabanzi ngalo.
Okulandelayo sizokutshela ukuthi iyini i-BIOS nokuthi ingeyani ku-PC yakho. Lokhu kuzokusiza ufunde kabanzi ngalo mqondo nokuthi ubaluleke kangakanani kukhompuyutha namuhla. Njengoba kuwumqondo ukuthi abaningi benu baye bahlangana ne-PC yakho ngesikhathi esithile futhi ofuna ukwazi okwengeziwe ngayo. Lo mhlahlandlela uzokusiza.
1 Iyini i-BIOS ye-PC
2 Iyini i-BIOS ku-PC
3 Ungangena kanjani ku-BIOS
3.1 Ithebula lokufinyelela le-BIOS
4 Finyelela i-BIOS ku-Windows
Iyini i-BIOS ye-PC
I-BIOS isifinyezo esisho amagama athi Basic Input-Output System, esingahumusha njengokuthi Isistimu Yokukhipha Okuyisisekelo Ngesi-Spanish. I-BIOS yinto yokuqala esebenza lapho sivula ikhompuyutha, ithebhulethi, umakhalekhukhwini noma ezinye izinto zikagesi, ngakho-ke kuyinto esetshenziswa kakhulu, njengoba ubona. Endabeni yekhompyutha, igama elithi BIOS alisetshenziswa njalo, nakuba umqondo ufana kuzo zonke izimo.
Eqinisweni sibhekene nakho ukulandelana kwamakhodi wokwenza (isofthiwe) egcinwe ku-chip ebhodini lomama (ihadiwe ye-PC). Lokhu kuyinto eyivumela ukuthi ibone ukuthi yini exhunywe kuyo, kungaba i-RAM, iprosesa, amayunithi okugcina nokunye. I-BIOS ivumela lokho esinakho ngempela i-PC, ngoba ngaphandle kwayo besiyoba nebhodi lomama.
Okwamanje i-BIOS inikeza inani elikhulu lolwazi, ulwazi ezimweni eziningi ngeke lutholakale ngaphakathi kwesistimu yokusebenza ngokwayo. Ngaphakathi kwe-BIOS yilapho ungenza ngokwezifiso izici eziningi cishe zanoma iyiphi i-hardware exhunywe ebhodini lomama, ngakho ibaluleke kakhulu kukhompuyutha, njengoba iwumnyango walezi zinketho. I-interface yayo ishintshile ngokuhamba kwesikhathi futhi kukhona okwamanje izinguqulo lapho singasebenzisa khona igundane, enye yezinguquko eziphawulekayo eminyakeni yamuva.
Iyini i-BIOS ku-PC
Njengoba sishilo phambilini, ukulandelana kokuqaliswa kwekhompyutha idlula ngokusebenzisa i-BIOS. Lapha yilapho amadivaysi ahlukene afakwe ku-motherboard ye-PC azoqashelwa khona. I-BIOS iwusizo kuwo wonke ukuthi axhunywe kuleyo bhodi yomama ngesofthiwe, ukuze kwenziwe isixhumanisi nemihlahlandlela esunguliwe, okuyizona ezizosetshenziswa kuze kube yilapho i-PC isizoqala futhi.
I-BIOS kukhompuyutha inikeza ulwazi oluningi, phakathi kwayo sithola imininingwane mayelana nokwehluleka okungenzeka okungavela lapho siqala i-PC, ikakhulukazi esimweni sokuhluleka kwe-hardware. Kule BIOS kubhalwe ukulandelana komsindo ezosakazwa kusipika uma kwenzeka kuba nokwehluleka engxenyeni ethile. Lokhu kulandelana ngokuvamile kungaboniswa kumanuwali ebhodi lomama laleyo khompyutha. Okusho ukuthi, uma noma iyiphi ingxenye yehluleka (i-RAM noma ikhadi lehluzo), umsindo ozowukhipha uzohluka, ukuze ubonakale kalula.
Uma sinebhodi lomama elisendaweni ephezulu-maphakathi yemakethe, bese sine-BIOS ephindwe kabili kuyo. Kuyisici esisiza kakhulu, ngoba uma i-BIOS yonakalisiwe, umphumela walokhu ukuthi ibhodi lomama alisebenziseki, into engaba yizindleko ezinkulu kanye nokulahlekelwa yimali kubasebenzisi. Ngokuba nokuphindwe kabili, ungakha noma ukhiqize ikhophi ye-chip kanye nokucushwa kwesibili. Nakuba izibuyekezo ze-BIOS zikhishwa, ukugwema lezi zinhlobo zezinkinga, kuyindlela enhle yokuqinisekisa ukuthi akukho lutho oluzokwenzeka.
Izilungiselelo ezilondolozwe ku-BIOS izohlala igcinwe ngisho nalapho leyo divayisi inqanyuliwe kunethiwekhi kagesi isikhathi eside. Igcinwe ebhethrini elikulelo bhodi lomama, ngendlela yokuthi isitoreji salo siyinto eqinisekiswa iminyaka. Kungenzeka ukuthi lelo bhethri lizophela, kodwa nakulezo zimo akuyona inkinga. Ngisho noma ibhethri lakho lifile, uzodinga kuphela ukulishintsha ngendlela efanele futhi ulayishe kabusha noma yiziphi izinguquko, ngale ndlela lokho kulungiselelwa kuzoboniswa futhi, ngaphandle kokuthi ulahlekelwe lutho. Ngakho-ke kuwukukhathazeka okuncane kunoma yimuphi umsebenzisi.
Ungangena kanjani ku-BIOS
Akubalulekile kuphela ukwazi ukuthi iyini i-BIOS. Futhi indlela esingafinyelela ngayo ku-PC kuyinto ethokozisayo kubasebenzisi. Njengoba abasebenzisi abaningi bengazi ukuthi bangayifinyelela kanjani. Isikhathi lapho esizoyifinyelela khona sisekuqaleni kwekhompyutha yethu. Lokhu kuyinto engashintshi kunoma iyiphi i-PC. Okusho ukuthi, akunandaba ukuthi iluphi uhlobo lwe-PC yakho, ukuthi isikhathi lapho sizofinyelela khona i-BIOS eshiwoyo ihlale ifana.
Nakuba isikhathi siyafana, kungase kube nomehluko omncane endleleni okufinyelelwa ngayo. Umehluko umane uwukhiye okuzodingeka siwucindezele. Ukufinyelela i-BIOS kuvamile ukuthi kufanele cindezela inkinobho ethi SUSA emizuzwaneni emihlanu yokuqala ngemuva kokuthi ikhompuyutha iqale. Kufanele sisheshe uma sifuna ukufinyelela, ikakhulukazi uma unekhompyutha egijima kakhulu.
Isihluthulelo okufanele sisicindezele sithi siyashintshashintsha. Kumakhompyutha amaningi kuyinto esingayenza ngokucindezela lowo khiye othi SUSA. Nakuba kungenzeka ukuthi eyakho ihlukile. Uma ukhiye we-DEL ungakuniki ukufinyelela ku-BIOS kukhompyutha yakho, kungase kube omunye walaba abanye okhiye: ESC, F10, F2, F12, noma F1. Ukwenziwa kanye nemodeli yekhompyutha yakho iyona ezonquma ukhiye okufanele uwucindezele, kodwa ngisho naphakathi kwamakhompyutha ohlobo olufanayo kufanele ucindezele ukhiye ohlukile. Kuzo zonke izimo, kufanele kwenziwe phakathi nemizuzwana emihlanu yokuqala ngemuva kokuthi i-PC iqalile.
Ithebula lokufinyelela le-BIOS
Ngenhlanhla sinohlu olunabakhiqizi bekhompyutha kanye nokhiye lapho kufanele ucindezele khona uma ufuna ukungena kule BIOS kukhompyutha. Laba okhiye abavame kakhulu uma ufuna ukufinyelela kukho kukhompuyutha yakho ngesikhathi esithile, kuya ngohlobo:
Umkhiqizi Ukhiye wokufinyelela we-BIOS ojwayelekile Okhiye Abangeziwe
ASROCK F2 SUSA
ASUS F2 DEL, Faka, F12, F10
I-GiGABYTE F2 SUSA
MSI SUSA F2
Finyelela i-BIOS ku-Windows
Ngaphezu kokufinyelela ekuqaleni, kunenye indlela eyengeziwe yendawo yonke yeWindows. Ngenxa yalokho, sizokwazi ukufinyelela i-BIOS yekhompyutha yethu uma kudingeka. Lena indlela esingayisebenzisa uma sinayo I-Windows 8, iWindows 8.1 noma iWindows 10 efakwe kukhompuyutha yethu. Uma unanoma iyiphi yalezi zinguqulo, uzokwazi ukusebenzisa le ndlela. Futhi kuyindlela elula kakhulu yokwenza.
Kumenyu yokuqala sibhala i-BIOS futhi sizothola uchungechunge lwezinketho esikrinini. Esikuthakaselayo kuleli cala ngukushintsha izinketho zokuqalisa ezithuthukisiwe. Uma leyo nketho ingaveli, singahlala siyibhala ngqo enjinini yokusesha. Uma sesivule le nketho esikrinini, sizokwazi ukubona ukuthi sithola isigaba esibizwa ngokuthi Ukuqala Okuthuthukile. Uma sichofoza inkinobho ethi Qala kabusha manje ngaphakathi kwalo msebenzi, ikhompuyutha izoqala kabusha ngemodi ekhethekile lapho sizokwazi khona ukufinyelela izinketho ezahlukene.
Kuleyo menyu ezovela ngokulandelayo, esikrinini esiluhlaza, chofoza inketho yokuxazulula inkinga. Esikrinini esilandelayo kuzodingeka sichofoze inketho Yezinketho Ezithuthukisiwe. Inketho elandelayo okufanele siyichofoze inketho ebizwa Ukucushwa kwe-firmware ye-UEFI. Ngokwenza lokhu, ikhompuyutha izoqala kabusha bese ingena ngqo kuleyo BIOS. Lokhu kuyinto ezothatha imizuzwana embalwa bese sizoba kuleyo interface ye-BIOS kukhompyutha yethu, esishintshe kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Njengoba ubona, kuyinto engeyona inkimbinkimbi futhi akuthathi isikhathi eside ukuyifaka, ngakho-ke singakwazi futhi ukufinyelela i-BIOS ku-Windows, into abasebenzisi abaningi abebeyifuna.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Izinhlelo zokusebenza » Iyini i-BIOS futhi ingeyani ku-PC yakho
I-Fortnite VR, izofika nini inguqulo ye-Virtual Reality?